Myanmar 2012 – Monk life (2001)
Golden Land MyanmarVarity of Culture
135 Ethnic Race
ဩစတြေးလျ​နိုင်ငံ​က ခရစ်​ကက် အား​ကစားသမား Phil Hughes ဟာ ဒီ​တ​ပတ်​ထဲ ကျင်းပ​တဲ့ ပြိုင်​ပွဲ​အတွင်း သူ့​ဦးခေါင်း​ကို ခရစ်​ကက် ဘော​လုံး ထိ​မှန်​ခဲ့​ပြီး ဒီ​က​နေ့​မှာ သေ​ဆုံး​သွား​ပါ​ပြီ ။ South Australia အသင်း​နဲ့ New South Wales အသင်း​တို့ ဆစ်​ဒ​နီ​မြို့​မှာ ယှဉ်​ပြိုင် ကစား​ကြ​တုန်း ဘက်​တန်​က စင်​ထွက်​လာ​တဲ့ ဘော​လုံး​က Phil Hughes ရဲ့​ဘယ်​ဖက်​နား အနောက်​ဖက်​ကို ထိ​မှန်​ခဲ့​တာ​ပါ။ အသက် ၂​၅​နှစ်​အရွယ် Phil Hughes ဒီ​နေ့ သေ​ဆုံး​သွား​ကြောင်း အား​ကစား အသင်း​ရဲ့ ဆရာဝန် Peter Brukner က ပြော​ပါ​တယ်။ အင်္ဂါနေ့​က ခရစ်​ကက်​ဘော​လုံး ထိ​မှန်​ခဲ့​တဲ့ …
ဒေါ်လာ​သန်း (၈​၀​၀) တန် ပြန်​ပေါင်း​ထုတ်​ပွဲ​တွေ ဖျော်ဖြေ​ဖို့ စာချုပ်​ကို​ငြင်းဆန်​သူ​များ
phyo, Nov 12, 2014
ဒေါ်လာ သန်း (၈​၀​၀) ဟာ ဘယ်လောက်​တန်ဖိုး​ရှိ​ပါ​သလဲ။ တ​ယောက်​ချင်း​စီ​အတွက် တန်ဖိုး​ဟာ​ကွဲပြား​နိုင်​တာ​ပေါ့။ Led Zeppelin တို့​အတွက်​တော့ သန်း (၈​၀​၀) ဟာ ဘာ​မှ​တန္ဖိုး​မ​ရှိ​လှ​ဘူး​လို့​ဆို​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဖြစ်​ပုံ​က ဒီ​လို။ ရော့ခ်​အင်​ရိုး​ရဲ့​ဖ​ခင်ကြီး​တွေ​ဖြစ်​ကြ​တဲ့ ဇက်​ပ​လင်​တို့​ကို ၃​၅ ပွဲ​တိတိ​ဆို​ပေး​ဖို့ ကန်​ထ​ရိုက်​တ​ခု​နဲ့​ကမ်းလှမ်း​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ (၃​၅) ပွဲ​အတွက် ဇက်​ပ​လင်​တို့​ရ​မယ့် ငွေ​ကြေး​ပမာဏ​ကတော့ ဒေါ်လာ သန်း (၈​၀​၀) ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အဆိုတော်​ရော​ဘတ်​ပ​လန့်​က အဲ​ဒီ​ကမ်းလှမ်း​ချက်​ကို ချက်ချင်း​ငြင်းပယ်​လိုက်​ပါ​တယ်။ ဘာ​ကြောင်း​ငြင်းပယ်​တယ်​ဆို​တာ အသေး​စိတ်​မ​သိ​ရ​ပေ​မယ့် ဂီ​တ​လောက​သား​တွေ​ရော ဂီ​တ​လောက​ထဲ​က စီး​ပွါး​ရေး​သမား​တွေ​ပါ တ​အာ​ကို အံ့ဩ​သွား​စေ​တဲ့​ဆုံးဖြတ်ချက်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အခြား​တီး​ဝိုင်း​သား​တွေ​က ဖျောင်း​ဖြ​ပေ​မယ့် အဆိုတော်​ရော​ဘတ်​ပ​လန့်​က လုံး​ဝ​အကြောက်​ကန်​ငြင်းဆန်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဇက်​ပ​လင်​တို့​ဟာ ရော့ခ်​အင်​ရိုး​ဂီ​တ​ရဲ့​ဖ​ခင်ကြီး​တွေ​လို့ သမုတ်​ကြ​တဲ့ ဇက်​ပ​လင်​တို့​ဟာ အသက် ၆​၀ …
ဂီ​တ​နဲ့ သရုပ်ဆောင်​နှစ်​ခု​စလုံး​မှာ ရပ်​တည်​သွား​မယ်​ဆို​တဲ့ ပိုး​အိ⁠အိ​ခန့်(အိမ်မက်​ဆုံ​ရာ) Season5
အိမ်မက်​ဆုံ​ရာSeason5 မှာ (8th runner up)ဆု​ရ​ရှိ​သူ တစ်​ဦး​ဖြစ်​ပြီး တစ်​ကိုယ်တော်​အခွေ​လည်း စီစဉ်​နေ​ပြီ​ဖြစ်​တဲ့ ပိုး​အိ⁠အိ​ခန့်​ဟာ ဂီ​တ​အပြင် သရုပ်ဆောင်​တာ​ကို​လည်း ဝါသနာ​ပါ​သူ​ဖြစ်​လို့ ဗီ​ဒီ​ယို ဇာတ်​ကား​ရိုက်​ကူး​တွေ​မှာ​လည်း သရုပ်ဆောင်​ထား​တာ​ကို တွေ့​မြင်​ရ​ဦး​မှာ​ပဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ သူ့​ရဲ့ ရှေ့​ဆက်​လျှောက်​လှမ်း​သွား​မယ့် အနု​ပညာ​ခရီး​လမ်း​နဲ့ ပတ်သက်​ပြီး မေး​ဖြစ်​ခဲ့​တာ​ကတော့ “စ​လုပ်​ကတည်းက ပြီး⁠ပြီး​ရော လုပ်​တာ​မဟုတ်​ဘူး။ ကိုယ်​တကယ် ဝါသနာ​ပါ​လို့ စိတ်​နှစ်​ပြီး​တော့ လုပ်​ခဲ့​တာ​ပါ။ အသစ်​တစ်​ယောက်​အနေ​နဲ့​တော့ လို​အပ်​ချက်​တွေ အများ​ကြီး​ရှိ​ပါ​သေး​တယ်။ အများ​ကြီး ကြိုးစား​နေ​ပါ​တယ်။ အခွေ​က​လည်း​လုပ်​နေ​ပါ​တယ်။ နောက်​နှစ်​ထဲ​မှာ​ပဲ ထွက်​ဖြစ်​ဖို့ များ​ပါ​တယ်။ MTV ပါ တစ်ခါတည်း ထုတ်​ဖြစ်​ဖို့ များ​ပါ​တယ်။ သီချင်း​ကိုး​ပုဒ်​လောက်​တော့ ပြီး​နေ​ပါ​ပြီ။ pop၊ R&B၊ Country တို့ သီချင်း​လေး​တွေ များ​ပါ​တယ်။ …
Bethlehem Vengthlang FC နဲ့ Chanmari West FC တို့​ပွဲ​ယှဉ်​ပြိုင်​ကစား​တဲ့ ပွဲ​ချိန် ၆​၂ မိ​နစ်​မှာ Bethlehem Vengthlang FC အတွက် Peter Biaksangzuala ဂိုး​သွင်း​အပြီး Miroslav Klose အောင်ပွဲ​ခံ​သ​လို ကျွမ်းထိုး​အောင်ပွဲ​ခံ​ဖို့ ကြိုးစား​လုပ်ဆောင်​ခဲ့​တာ​ပါ။ အသက် ၂​၃ နှစ်​ရှိ​တဲ့​သူ​ဟာ ကျွမ်းထိုး​ပြီး​အကျ မြေပြင်​ကို ခေါင်း​နဲ့​ကျ​ခဲ့​တာ​ကြောင့် ကွင်း​အလယ်​မှာ ပြန်​မ​ထ​နိုင်​ဖြစ်​ခဲ့​တယ်။ Biakzangzuala ဟာ လည်ပင်း​ရိုး ကျိုး​ပျက်​သွား​ပြီး ဆေး​ရုံ​တင်​ခဲ့​ပေ​မယ့် တနင်္ဂနွေနေ့​မနက်​ပိုင်း ဆး​ရုံ​မှာ ဝမ်းနည်း​ကြေကွဲ​စွာ သေ​ဆုံး​သွား​ခဲ့​ပါ​တယ်။ သူ​ဟာ Germany နိုင်ငံ ဘော​လုံး​သမား Klose နောက်​ကျွမ်း​ပစ်​ဂိုး​ရအောင်​ပွဲခံ​သ​လို လိုက်​လုပ်​ဖို့ ကြိုးစား​ခဲ့​ပေ​မဲ့ ကံ​မ​ကောင်း​ဘဲ ရွယ်​ရည်​ထား​သ​လို​ဖြစ်​မ​လာ​ခဲ့​တာ​လို့ …
ကာ​တာ​အသင်း​ကို အ ချိန်​ပို​သွင်း​ဂိုး​ဖြင့် ရှုံး​နိမ့်​ခဲ့သော် လည်း မြန်မာ​ကစားသမား​များ​၏ စွမ်း​ဆောင်​ရည်​ကို ဂုဏ်​ယူ​မိ ကြောင်း မြန်မာ ယူ-၁​၉ အသင်း နည်း​ပြ​ချုပ် ဂတ်​ဖ​ရိုင်း​ဒ​ရစ်​က ပြော​သည်။ ‘‘မြန်မာ​အသင်း​ရဲ့ ဒီ​နေ့ စွမ်း ဆောင်​ရည်​ကို အရမ်း​ကျေနပ်​ပါ တယ်။ ဒီ​လောက် စွမ်း​ဆောင်​ရည် ကို တွေ့​ပြီး​တဲ့​နောက်​မှာ​တော့ မြန်မာ​အသင်း​ရဲ့ နည်း​ပြ​ဖြစ်​ရ​တာ ဂုဏ်​ယူ​တယ်​လို့ ပြော​ရဲ​သွား​ပါ​ပြီ’’ ဟု အောက်တိုဘာ ၂​၀ ရက်​က သု​ဝဏ္ဏ​ကွင်း​၌ ယှဉ်​ပြိုင်​ကစား​ခဲ့ သည့် အာ​ရှ ယူ-၁​၉ ပြိုင်​ပွဲ အကြို ဗိုလ်​လု​ပွဲ​စဉ်​တွင် ကာ​တာ​အသင်း ကို အချိန်​ပို​သွင်း​ဂိုး ၂-၃ ဂိုး​ဖြင့် ရှုံး​နိမ့်​ခဲ့သော်​လည်း မစ္စတာ​ဂတ် က မြန်မာ​အသင်း​အတွက် …
လူ​တစ်​ယောက် စား​သောက်​ဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​မှာ အစား​သွား​စား​တယ်။ အစားစား​နေ​ချိန်​မှာ မတော်တဆ ဇွန်း​ပြုတ်​ကျ​သွား​တယ်။ ဘေး​မှာ​ရပ်​နေ​တဲ့ စားပွဲ​ထိုး​က ချက်ချင်း​ပဲ ဘောင်းဘီ​အိတ်​ထဲ​က​နေ ဇွန်း​တစ်​ချောင်း​ထုတ်ပေး​တယ်။ ဒါ​ကို သူ​က​တ​အံ့​တ​ဩ​နဲ့ စားပွဲ​ထိုး​ကို မေး​တယ်။ “ဘာ​ဖြစ်​လို့ ဇွန်း​ကို ဘောင်းဘီ​အိတ်​ထဲ ထည့်​ထား​ရ​တာ​လဲ?” စားပွဲ​ထိုး……. “ကျွန်တော်​တို့​အထက်က အကြံပေး​လူကြီး​တွေ​က ကျွန်တော်​တို့​ရဲ့​အလုပ်​ကို ပို​တိုးတက်​ကောင်းမွန်​အောင်ဆို​ပြီး အပြောင်း​အလဲ လုပ်​လိုက်​တယ်။ စား​သုံး​သူ​တွေ မတော်တဆ ဇွန်း​ပြုတ်​ကျ​သွား​ရင် ကျွန်တော်​တို့ ကိုယ်ပေါ်​က​နေ ချက်ချင်း​ထုတ်ပေး​နိုင်​အောင် စီစဉ်​ထား​တယ်။ ဒီ​လို​ပြောင်းလဲ​လိုက်​တာ​နဲ့ အလုပ်​ရဲ့​တိုးတက်​နှုန်း​က ၃​၁% ရှိ​သွား​ပါ​တယ်။ ဒါ​ဟာ မီးဖို​ထဲ​ထိ ဇွန်း​သွား​ယူ​မယ့် အသွားအလာ​ချိန်​ကို သက်သာ​စေ​ပါ​တယ်” “အင်း သိပ်​ကောင်း​တဲ့ အကြံ​ပါ​ပဲ” ဒီ​လို​နဲ့ စား​သောက်​ပြီး​ငွေ​ရှင်း​ဖို့ ကောင်​တာ​ဆီ သူ​သွား​လိုက်​တယ်။ အဲ​ဒီ​မှာ …
အင်း​လေး​မှာ​ရွာ​တဲ့​မိုး ( နီ⁠နီ​ခင်ဇော် )
မာ​ရီ​ယို MTV ထွက်​ရှိ​ထား​ပေ​မယ့်​လို့ လတ်​တ​လော​မှာ အင်း​လေး​မှာ​ရွာ​တဲ့​မိုး သီချင်း​နဲ့ ပရိသတ်​တွေ​ကြား ရေပန်း​စား​နေ​တဲ့ နီ⁠နီ​ခင်ဇော်​ကို လတ်​တ​လော အနု​ပညာ​လှုပ်ရှား​မှု အကြောင်း မေးမြန်း​ဖြစ်​တဲ့​အခါ “မန္တလေး၊ မေမြို့၊တောင်​ကြီး​တွေ​မှာ ဆက်တိုက်​သီချင်း​တွေ ဆို​ဖြစ်​နေ​ပါ​တယ်။ ပြီး​တော့ ရန်ကုန်​ပွဲ​တွေ ဆို​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ရှိုး​ပွဲ​တွေ​မှာ နီ​နီဖျော်​ဖြေ​ရင်း ပရိသတ်​တွေ​က အင်း​လေး​မှာ​ရွာ​တဲ့​မိုး​နဲ့ မျှော်လင့်​ချက်​တစ်​စုံ​တ​ရာ သီချင်း​နှစ်​ပုဒ်​ကို​တော့ ပရိသတ်​တွေ အရမ်း​တောင်း​ဆို​လွန်း​လို့ ဖျော်ဖြေ​ပေး​ရ​တာ​ပေါ့။” လို့ သူမ​က ပြော​ပါ​တယ်။ လတ်​တ​လော​မှာ အင်း​လေး​မှာ​ရွာ​တဲ့​မိုး သီချင်း​ကို ပရိသတ်​တွေ အရမ်း​ကြိုက်​နေ​ကြ​တာ​မို့ အဲ​ဒီ့​သီချင်း​လေး​နဲ့ ပတ်သက်​ပြီး အခက်​အခဲ​နဲ့ အမှတ်တရ​တွေ​ရှိ​ရင်​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​လို့​ဆို​တော့ နီ⁠နီ​က “အဲ​ဒီ့​အင်း​လေး​မှာ​ရွာ​တဲ့​မိုး သီချင်းဆို​တဲ့​နေ့​က အသံ​အရမ်း​ဝင်​နေ​တယ်။ သီချင်း​မ​ဆို​နိုင်​တဲ့ အခြေအနေ​ဖြစ်​နေ​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် အခွေ​က​လည်း ထွက်​တော့​မယ် …
Sleeping With Sirens အဖွဲ့​ဟာ ပြီး​ခဲ့​တဲ့ ပိတ်​ရက် UK န်ိုင်​ငံ​ရဲ့ Reading ပွဲတော်​မှာ သီချင်း​အသစ် Kick Me ကို​စ​တင်ဖျော်​ဖြေ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဒီ​သီချင်း​အတွက် ဂီ​တ​ဗီ​ဒီ​ယို​ကို​လည်း​ရိုက်​ကူး​ထား​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အောက်​က​ပြ​ထား​တဲ့ link မှာ​တော့ ဝိုင်း​ရဲ့ဖျော်​ဖြေ​မှု​တစ်​ခု​လုံး​ရဲ့ ရုပ်​သံ​ကို​ပြ​ထား​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ သီချင်း​ကတော့ ၂​၈ မိ​နစ်​အရောက်​မှာ​စ​တာ​ပါ။ သူ​တို့​အဖွဲ့​ဟာ Pierce the Veil အဖွဲ့​နဲ့​ပူးတွဲ​ဦးဆောင်​ပြီး အမေ​ရိ​ကန်​နိုင်ငံ​အနှံ့ နယ်​လည့် ဖျော်ဖြေ​ပွဲ ကျင်းပ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ နိုဝင်ဘာ​နဲ့ ဒီဇင်ဘာ​လ​တွေ​မှာ​ကျင်းပ​မှာ​ဖြစ်​ပြီး သူ​တို့​ကို အထောက်​အပံ့​အနေ​နဲ့ဖျော်​ဖြေ​တဲ့​ဝိုင်း​တွေ​ကတော့ Beartooth နဲ့ The Wild Life တို့​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ကမ္ဘာ့ အသန်​မာ​ဆုံး ဘုန်းကြီး​အဖြစ် နာမည်​ပေး​ခံ​ခဲ့​ပြီး​တဲ့ Rev. Dr. Kevin Fast ရဲ့ အလေး​မ​စွမ်း​ရည်​ဟာ ဘုရားသခင်​ရဲ့​ဆု​ကျေးဇူး​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ၁​၉ ရာ​စု​ရဲ့​စွမ်းအား​ရှင်Louis Cyr ဆီ​မှ လှုံ့ဆော်​မှု ရ​ရှိ​ပြီး​တဲ့​အချိန်​မှ​စ နှစ်​နဲ့​ချီ မ​ယုံ​နိုင်​လောက်​အောင် အလေး​မ​စွမ်း​ရည်​ကို အသက် ၅​၁ နှစ်​ရှိ က​နေ​ဒါ​လူ​မျိုး Pastor ပြသ​လာ​ခဲ့​တာ​ပါ။ တန်​ချိန် ၁​၈​၉ အလေး​ချိန်​ရှိ အလေး​အများ​ဆုံး လေ​ယာဉ်​ကို တစ်​ယောက်​အား​ဖြင့်​ဆွဲ​တာ၊ အလေး​ဆုံး ထ​ရပ်(ခ်)ကား လက်​တစ်ဖက်​တည်း​ဖြင့် ဆွဲ​တာ၊ အလေး​လံ​ဆုံး စက်​ယန္တ​ယား​ကို ပေ​တစ်​ရာ​ထိ ဒ​ရွတ်​တိုက်​ဆွဲ​သွား​တာ၊ ပု​ခုံး​နှစ်​ဖက်​နဲ့ အလေး​ချိန် ၅​၀​၀ ကီ​လို​ဂ​ရမ်​ကို အချိန်​အကြာ​ဆုံး ထမ်း​ထား​နိုင်​တာ​တွေ​ဟာ ကမ္ဘာ့ ဂေး​နစ်စ်​ချိန်​စံ​တွေ​ကို မှတ်တမ်း​စေ​နိုင်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ တခြား​ထူးခြား​တဲ့ …